▷ Ko kondirakiti itsva yebasa yevaimbi, nyanzvi uye vabatsiri munyika yehunyanzvi inorevei? · Legal News | Ruzivo ZVINO【 2022 】
Ko chibvumirano chebasa chitsva chinorevei kune maartist, matekiniki uye vabatsiri munyika yehunyanzvi? · Nhau dzepamutemo
Bazi rehunyanzvi rakasangana nedambudziko remwedzi mishoma kubva pashanduko yevashandi iyo yakachinja zvachose hurongwa hwekuhaya munyika yedu yakaitika mumabhawa ekupedzisira a2021. Kururamiswa kwechibvumirano chenguva pfupi mukuvapo kwerimwe basa uye nhanho ine hurongwa umo chinhu chakakosha huwandu hwechiitiko mukambani nenzira yegeneric, uye umo zvibvumirano zvenguva pfupi zvakanyanya kurangwa.
Shanduko yemutemo iyi yakave nemhedzisiro izere pachikamu chinonyatso zivikanwa nekugadzira basa rinotarisa kune chaiwo mabasa kana zviito, uye izvo panguva dzakawanda dzinoitwa panguva dzakatarwa.
Kusvika parizvino, maartist anga aine mirau chaiyo yaidzora hukama hwavo hwebasa uye yaibata nezvimwe zvezvayakaita, asi zvibvumirano zvavo zvinofanirwa kudzorwa nemaitiro anosanganisirwa muWorkers' Statute, kazhinji inowira mukati mekondirakiti yebasa kana sevhisi. Nekudaro, shanduko yehurongwa hwekushanda kwekondirakiti nekuda kwekuvandudzwa kwevashandi kwakasiya makambani ari muchikamu ari pamakumbo emabhiza nekuda kwekuomerwa kukuru kuri kuitika mukukodzera rudzi urwu rwechiitiko muchibvumirano chitsva chenguva pfupi chinogona kusainwa chete kana. kune kuwedzera kana kushanduka kwekuita mukambani uye izvo, nekuwedzera, zvinoreva kutora mari yekuwedzera yekuchengetedza magariro ezvibvumirano zvenguva pfupi.
Musi waKurume 23, Royal Decree-Law 5/2022 yakaburitswa muBOE uko dambudziko rakakonzerwa nekuvandudzwa kwevashandi rinogadziriswa, uye kune chibvumirano chitsva chebasa chine zvimwe zvitsva.
1 Nzvimbo yekushandisa
3 Kuguma kwehukama hwekushanda
Kusvika pari zvino, hapasati pave nechirevo chakajeka che "artist", uye nyanzvi idzi dzakangotsanangurwa sevaya vanoita "chiitiko chehunyanzvi" chinogona kunge chiri pamberi peruzhinji kana kuti chakanangana kurekodha nekutepfenyura muruzhinji kana mitambo yemitambo. type. Chinhu chakanyanya generic uye chisina kujeka.
Chimiro chitsva chinotarisisa zvakanyanya muiyi nyaya, uye chinoratidza kuti ivo maartist "vanoita basa ravo mukuita, audiovisual uye mimhanzi hunyanzvi", uye kuti inogona kusanganisira avo "vanoita mabasa ehunyanzvi, angave anoshamisa, anodenha, choreographic, marudzi, nziyo, kuimba, kutamba, zvokufananidzira, nyanzvi; yekutungamira kwehunyanzvi, yecinema, yeorchestra, yekuchinjisa mumhanzi, yechiitiko, yekuziva, yekunyora, yeaudiovisual basa; circus artist, puppet artist, magic, scriptwriters, uye, chero zvakadaro, chero munhu upi zvake ane chiitiko chinozivikanwa semuimbi, muturikiri kana mutambi nezvibvumirano zvakabatanidzwa zvinoshanda mumitambo yemitambo, audiovisual chiitiko uye mumhanzi".
Mukuita, uye kunyange zvazvo munguva yakapfuura pakanga pasina matambudziko mashomanana, patova nekubvumirana kwakamwe mukufunga nezvevanyori kuti vave avo vakagadzira mabasa akadai seaya achangobva kutaurwa, saka mutemo zvino unouya kuzopa kuvharidzirwa kwepamutemo kune tsika yekugara , kupa chokwadi chepamutemo kune nhengo dzechikamu.
Chinhu chikuru chitsva ndechekuti pamwe chete nemutemo mutsva uyu wehukama hwevashandi vevashandi, inosanganisira boka revanyanzvi nevabatsiri vanopa masevhisi muchikamu, avo mafambiro ebasa anogona kunge akafanana neaya evanyori pachavo uye avo, Naizvozvo, vane nguva yakaoma kupinda mubasa idzva renguva pfupi iro rava kusanganisirwa muMutemo weVashandi. Nenzira iyi, kubva zvino zvichienda mberi, boka revanyanzvi uye vabatsiri kumabasa ekugadzira vachavewo nemhando yavo chaiyo yekontrakiti, uye vanozobatanidzwa sehukama hunokosha hwebasa.
Zvakare, ndinoda kunyevera kutarisisa kwakadzikama uye chokwadi chekuti zvakajairwa zvine hanya kune zvitsva zvechokwadi, kubatanidzwa mumhando iyi yekontrakiti inofungidzirwa kuti ivo vanopa masevhisi ekupararira kwavo neInternet.
Hapana anogona kufuratira kuti nyika yehunyanzvi yakasarudzika, uye mune dzimwe nzvimbo dzechikamu iro divi rine hunyanzvi hwaro hwekuti chibvumirano chekutaura chave chakajairika. Mutemo unogumisa mamiriro ezvinhu aya uye unoda kuti, nguva dzose, chibvumirano chakanyorwa chisayinwe.
Ichokwadi kuti chiitiko chehunyanzvi chinowanzo ratidzwa nekugadzira mabasa eapo neapo asingagone kuitwa nguva dzese pamazuva chaiwo, uye izvi zvakatorwawo mukufunga. Ndokusaka chiyero chisingade zvishoma zvemukati zvekondirakiti, uye inobvumira "zvinhu zvakakosha uye mamiriro makuru" kuti apinzwe mune imwe gwaro.
Kondirakiti inogona kunge isingagumi kana yenguva pfupi, uye inogona kuitirwa imwe kana akati wandei mitambo, kwemwaka, yekutamba, yeimwe yezvikamu zvekugadzira, nezvimwe. Mune mamwe mazwi, inogona kugumira kune rimwe basa, zvakanyanya kuenderana nehurongwa huripo pamberi pekuvandudzwa kwevashandi, kubvuma mukana wekuti sevhisi inogona kunge iri pakati pechibvumirano pachayo.
Zvisinei, shanduko yebasa inoonekwa muzvinhu zviviri zvakakosha: (i) kudiwa kwekururamisa chimiro chenguva yekondirakiti zvakakwana uye zvakanyatsojeka; uye (ii) mukana wekuti kondirakiti ionekwe seasina magumo kana kutevedzana kwezvibvumirano zvenguva pfupi izvo zvichagamuchira Workers' Statute zvikaitika, izvo zvingava mwedzi 18 mukati menguva ye24 mwedzi.
Nezvekupedzisira, zvakakosha kuyeuka kuti mutemo haugadziri muganhu wepamusoro pane nguva yezvibvumirano zvenguva pfupi, izvo zvichange zvichingoenderana nemamiriro enguva yebasa kana basa raakanyorera. Ndokusaka kondirakiti imwe chete inogona kudarika mwedzi ye18 pasina izvi pachazvo zvichireva kutendeuka kwayo otomatiki kuita imwe isingaperi, chero isina imwe pakarepo inotangira kana inotevera iyo inoreva chain inodiwa.
Kuguma kwehukama hwekushanda
Nemutemo wapfuura, kana mugadziri aine kondirakiti iyo nguva yaipfuura gore, aive nekodzero yekugamuchira muripo wekuti, padiki, waifanira kunge uri muhoro wemazuva manomwe pagore wakashanda.
Nekudaro, iyi panorama inoshanduka zvakanyanya nemashoko matsva eRoyal Decree 1435/1985, asi muripo unodzivirirwa, padiki - zvichigoneka zvirinani nechibvumirano chemubatanidzwa - chemazuva gumi nemaviri pagore akashanda kana nguva yebasa rekondirakiti yakanyanya. yemwedzi gumi nemasere. Kana ukapfuura muganhu iwoyo, ipapo muripo unosvika kumazuva makumi maviri emuhoro pagore wakashanda.
Iko hakuna shanduko maererano nechiziviso chinodiwa icho kambani inofanirwa kupa kune muimbi, saka panguva ino zvakare inotambanudzirwa kuboka revanyanzvi nevabatsiri.
Specializations mune filler zvinhu
Vanyori vakanyoreswa sevanozvishandira vanozove nemutengo wakadzikira kana mari yavo yepagore iri pasi pe3.000 euros.
Kune rimwe divi, makambani haabvumidzwe kubhadhara mupiro wekuwedzera we26,57 euros iyo mutemo ikozvino inoda kubhadhara kana chibvumirano chemazuva asingasviki makumi matatu chikaitika, uye izvi kune vese maartist uye kune vashandi vanoenderera mberi. boka revanyanzvi nevabatsiri.
Zvese izvi zvitsva zvinosanganisirwa muRoyal Decree-Law 5/2022 zvakagadzirisa zvinyorwa zveRoyal Decree 1435/1985, iyo, nekuwedzera, yakashandura zita rayo kuti ibatanidze muzita rayo zvakare boka revanyanzvi uye vabatsiri vechiitiko chehunyanzvi. Nekudaro, mutemo uyu unofungidzirwa muchikamu chechishanu chekupedzisira kuzvipira kudzima Royal Decree ichangobva kuvandudzwa mukati memwedzi gumi nemiviri kuitira kubvumidza mutemo mutsva. Tichatofanira kuramba takangwarira.
Dare Repamusorosoro rinobvisa kusunungurwa kwe…
Nyowani 500 'la Prima naBocelli', iyo yekutanga yemadhorobha ye…
Spotify yakabhadhara mari inodarika 4,5 miriyoni euros kune zana nemakumi matatu maartist uye…
Catalonia inofambira mberi uye inokurudzira rudzi rutsva rwekondirakiti ye…
Iyo SMI nyowani ye2022 inobata sei mitengo? ·…
Iyo Bernabéu, bhenji rekuyedza revarairidzi veBarcelona
Kufananidza • kugona kudzora nevabatsiri
IU-Podemos Toledo inoshora kuti timu yehurumende ine…
Categories MUMATARE Tags Zvinyorwa, Newsletters, Mutemo, España, kutonga, Mutemo, Mutemo, Mitemo, Noticias Kubatikiti kufamba
Vanogona kundimanikidza kusaina imwe mari yembavha here?
Mungandipewo imba yemba here kana ndine mari yandakachengeta kana ndisingashande?